Qibrada Qatar Airways ee argagaxa leh waxaa ka mid ahaa baaritaanka xubinta taranka ee garoonka diyaaradaha Doha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qibrada Qatar Airways ee argagaxa leh waxaa ka mid ahaa baaritaanka xubinta taranka ee garoonka diyaaradaha Doha
Airlines • Airport • Wararka Australia • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • News • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Haweenka Rakaabka ah ee Qatar Airways QR908 ee hubinaayay inay ka duulaan Doha ilaa Sydney waxaa amar ku siiyay Maamulka Qatar bishii Oktoobar 2. Waxay u sheegeen kalkaaliyayaasha caafimaadka dumarka inay xubintooda taranka u baahan yihiin in la baaro ka hor inta aan dib loogu oggolaan diyaaradda. Baaritaanka waxaa ka mid ahaa taabashada xubinta taranka dadka waaweyn.
Qatar Airways iyo Masuuliyiinta Qatar waxay duulimaadkii khibraddiisa ka dhigeen riyo cabsi leh oo aan weligeed soo marin rakaabka marwada ah. Ma ahayn dib udhaca seddex saac ee bixitaanka, laakiin sida uu sheegay qof rakaab ah dhamaan dumarka qaan gaarka ah ayaa laga saaray diyaarada maamulka waxaana loo qaaday ambalaasta sugeysa banaanka garoonka.
QR908 bishii Oktoobar waxay ahayd inuu ka dhoofo Madaarka Caalamiga ah ee Hamad (HIA) ee Doha, Qatar 8:30 pm waqtiga maxaliga ah laakiin dib ayuu udhacay seddex saacadood ka dib markii ilmo dhicis ah laga helay musqusha Terminalka.
Mid ka mid ah haweenka ayaa weriyayaasha ugu sheegtay Australia. “Ma jiro qof ku hadlay Ingiriis ama noo sheegay waxa dhacaya. Waxay ahayd wax laga naxo, ayay tidhi. Waxaan ahayn 13 annaga oo dhammaanteenna waxaa nalaga dhigay inaan baxno.
“Hooyo aniga agtayda ah waxay caruurteeda oo hurda kaga tagtay diyaaradda.
“Waxaa jirtay haweeney da’ ah oo aragga naafo ka ahaa waana inay iyaduna aado. Waan hubaa in la baaray.
Wasiirka arrimaha dibedda Marise Payne ayaa sheegtay in "dhibaatada weyn, xadgudubka, ee ku saabsan dhacdooyinka" loo gudbiyay Booliska Federaalka Australia (AFP).
Warbixin ay soo saartay, HIA waxay ku xaqiijisay in canugga uu “nabad qabo” laguna xannaaneynayo Qadar, iyo in xirfadlayaasha caafimaadku “ay walaac ka muujiyeen saraakiisha caafimaadka iyo daryeelka hooyadeed oo hadda umushay oo ay codsatay in la joogo ka hor inta aysan bixin .
"Markii aan fuulay ambalaaska, waxaa jirtay haweeney wejiga soo duubatay ka dibna maamulka ayaa iga xiray ambalaaska aniga oo xiray", qof rakaab ah ayaa soo wariyay
“Waxaan iri‘ ma sameynayo taas ’iyaduna waxba iima sharixin. Waxay kaliya ku celcelisay, 'waxaan u baahanahay inaan aragno waxaan u baahanahay inaan aragno'.
Haweeneyda ayaa sheegtay inay isku dayday inay ka degto ambalaaska isla markaana maamulka dhinaca kale ay albaabka ka fureen.
“Waan soo booday ka dibna waxaan ku orday gabdhihii kale. Meel aan u cararo ma jirin, ayay tiri.
Haweeneyda ayaa sheegtay inay dharka iska siibtay oo la baaray, ayna taabatay, kalkaalisada dumarka ah.
Waan argagaxay. Qof kastaa wuu caddaaday wuuna gariirayay, ayay tidhi.
Aad ayaan u baqay waqtigaas, ma aanan ogeyn waxa suurtagalka ah. ”
Senator Payne, oo sidoo kale ah Wasiirka Haweenka, ayaa sheegtay inay toddobaadkan ka sugayaan warbixin ku saabsan dhacdada dowladda Qatar.
"Ma ahan wax aan waligey maqlay oo ku saabsan noloshayda, xaalad kasta ha noqotee," ayay tiri.
Aragtidayada ayaan si cad ugu sheegnay mas'uuliyiinta Qatar ee arintan ku saabsan. "
Booliska NSW ayaa sheegay in haweenkan ay heleen taageero caafimaad iyo mid nafsiyadeed intii ay ku jireen karantiil huteelka ee magaalada Sydney
Wasiirka arrimaha dibedda ee Shadow Penny Wong ayaa baraha bulshada u dirtay in ay ku booriso mas'uuliyiinta Qatar in ay noqdaan "hufnaan".